Ny Fikambanana Mpanao Taokanto Ao An-damosin’ny Revolisiona Bôlivara. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2014 4:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Français, 日本語, Español
Fitaovam-piadiana politika manana ny lazany ny Taokanto. Any Venezoela, nampiasa kirangodrangotra sy endrika hafa amin'ny taokanto ho an'ny maso ny andiany iray mitonona ho ny “Ejército Comunicacional de Liberación” ECL (ny “Tafika ho an'ny Fahalalahan'ny Fifandraisana”) mba hanohanana ny Revolisiona Bolivariana, hetsika sosialin'ny elatra havia natombok'ilay filoha Venezoeliana efa nodimandry, Hugo Chávez. Dongian'ilay fikambanana ireo toerana malalaka eny an-tanàn-dehibe hanaovany kisary, amin'ny fakàna ny rindrin'ireo tranobe ho fanànan'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Amporisihan'ny ECL ao amin'ny bilaoginy No Sabemos Disparar (Tsy Hainay ny Fomba Fitifitra) ny fanaovana izany eny an-tanàn-dehibe, bilaogy ilazan'ilay vondrona fa tanjona telo lehibe no tratrariny:
Mampanao fiofanana ihany koa ny ECL iarahany miasa amin'ireo tarika sy vondrom-piarahamonina hafa manerana an'i Venezoela. Eny aminà kianja natao ho an'ny daholobe no atao ireny fanazàrana ireny, toy ilay iray asehon'ny sary etsy ambany tao Elorza, ao amin'ny fanjakan'i Apure :
Nanana ny dindony tamin'ireo hetsi-panoherana izay nampihovitrovitra an'i Venezoela nandritra ireo volana maro faramparany teo ihany koa ilay vondrona. Ao anatin'ny sary etsy ambany, kianin'ny ECL ny fototra nijoroan'ireo fihetsiketsehana tany Atsinanan'i Caracas, izay tsy nisy nilàna ny mpanakanto no sady tsy nisy zavatra nifantohana (ny hetsi-panoherana resahana eto dia tafiditra amin'ny hetsika an-dalambe goavana nahenika ny firenena, izay nitakiana ny fialàn'ny Filoha Nicolás Maduro. Mivaky toy izao ilay sary an-drindrina, “Tsy hiverina ry zareo,” midika hoe tsy ho afaka hiverina mandrakizay ireo sangany ara-politika tamin'ny vanim-potoana nialoha ny nitondràn'i Chavez.
Ahitàna taokanto nataonà vondrona hafa ihany koa ao amin'ny bilaogin'ny ECL, vondrona izay sady hita ao anatiny no any ivelan'i Venezoela. Nakarina ao amin'ny Vimeo ireo lahatsary misy azy io, izay fampiasan'ilay fikambanana mba hanasongadinany ny endrika tena maha-taokanto ho an'ny maso ny fikatrohana sosialy sy politika ataon-dry zareo.